जूनताराहरु पनि रोएको जुनेली रातमा « Postpati – News For All
तस्बिरमा २०६२ मंसिर १४ गते साँझ रोल्पा जिनावाङको मनिमारेमा तत्कालिन दुश्मन सेनाको हवाई हमलामा शहीद हुनुभएका जनमुक्ति सेना नेपाल पाँचौं डिभिजनका तत्कालिन कमाण्डर रोल्पा गजुलका किमबहादुर थापा ‘सुनिल’ र सोही डिभिजन अन्तर्गत बटालियन सह-कमाण्डर सल्यान कालागाउँका झक्कुप्रसाद पुन ‘निर्मम’ ।
एक्कासी मनिमारेको आकाशमा जासुसी विमान देखियो, सँगसँगै लडाकु हेलि पनि । बिहान जनसेनाको आक्रमणपछि पत्तासाफ भएको विमान एकैपटक साँझ पो देखियो । आकाशमा विमान र हेलिले चक्कर काट्न थालेपछि आक्रमण गर्ने करिब-करिब निश्चितजस्तै भइसकेको थियो । दुश्मनले विमान र हेलिबीच एकआपसमा कुरा गरेको हामीले रेडियो सेटमा स्पष्टसँग सुनिरहेका थियौं । विमानबाट हेलिलाई बारम्बार ‘छिटो आक्रमण गर’ भनेर निर्देशन दिइरहेको थियो भने हेलिबाट ‘ख्वैं कहाँ छन्, त्यहाँ चौरमा त रातो झण्डाबाहेक केही छैन’ भनिरहेको थियो ।
दुश्मनको योजना खुलिसकेपछि डिभिजन कमाण्डर सुनिलले सबैलाई आ-आफ्नो आर्क र जंगलतिर जान निर्देशन दिनुभयो र जनसेनाहरु निर्देशनबमोजिम आ-आफ्नो आर्क र जंगलतिर दौडिए । मञ्चमा केही साथीहरु सामान राख्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यत्तिखेरै हेलिले एचएमजी, जीपीएमजी, मोर्टारलगायतका अत्याधुनिक हतियारबाट अन्धाधुन्ध हमला गरिहाल्यो । एकैछिन अघिसम्म शान्त मनिमारे, बुँरासे, जथाक र आसपासको क्षेत्र बमगोलाको गर्जनले थर्किन थाल्यो । यता जनसेनाहरु बाँझ, ओखर, खर्सु र गुराँसका बोटहरुको कभर लिदै जंगलैभरि छ्याप्छ्याप्ती भरिए ।
त्यसपछिको स्थिति, ख्वैं ? मैले कुन शब्दमा लेखुँ युद्धमैदानको सघन अनुभूति ? खुट्टामुनिको जमीन जोत्दै पड्किने मोर्टार र कानैनिरबाट सुइकिने गोलीका पर्राहरुको बीचमा बाँचिरहदाको असीमित आतंक र आक्रोश । गोलीका पर्राहरुले भाँचिएका रुखका हाँगाहरु टाउकैमाथि खस्दा लाग्थ्यो, हामी पनि पालो पर्खिरहेका छौं । अरु कता-कता दौडिए ? के-के सामान लिएर गए ? थाहा नै भएन । आफू त झोला र मेण्डुलियन बोकेर व्यानर तान्दै थिए, छेऊमै गोलीले धूलो उडाउन थाल्यो, त्यसपछि जंगलतिर टाप कसें । बडो विडम्बना त यो भयो कि साथमा भिडियो क्यामेरा हुँदाहुँदै हवाई हमलाको दृश्य लिन सकिएन । कारण- ब्याट्रीको चार्ज सकिएको थियो । हुन त ब्याट्री चार्ज गर्नलाई हामी विद्युत् सुविधा भएको ठाउँमा कहिल्यै जान पाएनौं, जाने अवस्था पनि थिएन । एउटा मात्रै ब्याट्री, सधैं सोलार ब्याट्रीबाट चार्ज गर्ने हो त्यो पनि जहाँतहीं आजभोलिको जस्तो सम्भव थिएन । त्यसदिन झनै चार्ज गर्न नै पाइएको थिएन ।
अब त अँध्यारो भइसकेको थियो- गाढा रातो गोधूली साँझको पश्चिमी क्षितिजबाहेक । नजिककै साथीको अनुहार ठम्याउन पनि नसकिने बेला भइसकेको थियो । अलि-अलि गर्दै तितरवितर भएको टोली चौरमा जम्मा हुन थाल्यो । अस्पष्ट, अपुष्ट खबरले सबैतिर आतंकित बनाइरहेको थियो, खासखुस चलिरहृयो- करिब १५/२० मिनेटजति । केही समयपछि तल जंगलको छेऊबाट आएको चर्को रुवाई र कोलाहलले मुटु नै छेडेर गयो । त्यतिञ्जेलसम्मको सन्त्रास, भय र आतंक यथार्थतामा पुष्टि भइसकेको थियो ।
डिभिजन घोषणा भएकै दिन पाँचौं डिभिजनले कमाण्डर गुमाएर टुहुरो भइसकेछ । कमाण्डर क.सुनिलको सहादत भइसकेछ । त्यतिखेरै अर्को सनसनी फैलियो चौरमा- ‘बटालियन सहायक कमाण्डर क.निर्ममको पनि सहादत भयो ।’ कसैले सुनाउँदै थियो अरु कमरेडहरुलाई- ‘तल खोलामा पछाडिबाट लागेको गोलीले उत्तिबेलै निर्ममजीको पनि सहादत ……… ।’ मैले शब्दमा लेख्न सक्तिन, शोकाकूल परिवेशको त्यो सघन अनुभूति । युद्धमैदानमा आफ्नै आँखाअगाडि जीवनसंगी गुमाउनुपर्दाको पीडा बाग्मती थापाले कसरी सहनुभयो ? छोरा विजय र छोरी दिव्यज्योती पनि त्यही थिए । दुई/दुई जना होनहार प्रतिभा, बहादुर, क्षमतावान् कमाण्डर र सहयोद्धाको अप्रत्याशित क्षति, खै ? कुन शब्दमा लेख्ने पूरै स्तब्धता र शोकमा डुबेको त्यो विशाल फौजको असीमित पीडा ?
दिल्ली मल्लको ब्लग बाट